‘चुरे क्षेत्र उत्खनन् हुन्न’ - Khabar Break
काठमाडौं । सरकारले ढुंगा गिटी, बालुवा निकासी गर्दा चुरे क्षेत्र उत्खनन् नहुने प्रस्ट पारेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी घोषणा गरेपछि चुरे विनास हुनसक्ने चिन्ता सन्दर्भमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) द्वारा बुधबार आयोजित ‘ हाकाहाकी बहस’मा ‘सरकार र सरोकारवाला निकाय चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् नगर्ने’ विषयमा एक मत भएका हुन् ।
निर्माण सामग्री निर्यातको अर्थ राजनीति विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले दुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने दावी गरे
राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले अन्य मुलुकबाट सिक्दै वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा प्राकृतिक स्रोत परिचालन गरेर बढीभन्दा बढी आम्दानी गर्नसके आर्थिक तथा समाजिक विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे । मुलुकको विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । तराईमा ४० वर्षयता भूमिगत पानीको सतह (लेयर) नघटेको विज्ञानले देखाएको पनि ओलीले औंल्याए ।
सरकारले तराईको जलचक्र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नदीमा डाइभर्सन बनाएर सिंचाइ पहुँच पु¥याउनेगरी योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पे्रमनारायण कँडेलले चुरे संरक्षण सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताउँदै अबका दिन विकास र संरक्षण सँगसँगै अघि लगिने बताए ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन् गर्न सकिने भन्दै पहिला देशभित्रको आवश्यकता पूरा गर्ने र त्यसपछि निर्यात गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले चुरे संरक्षणमा सबैको चासो देखेर खुसी लागेको भन्दै कुनै सम्झौता नहुने बताए । जैविक विविधता विज्ञ डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठले पहाड खनेर ढुंगा निकाल्ने काम गर्नै नहुने बताए ।
सबैभन्दा कमजोर चुरे छुनेभन्दा पनि संरक्षणमै विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ । तत्कालीन चुरे गुरुयोजना निर्माण कार्यदलका टिमलिडर डा. विनोद भट्टले चुरेमाथिको महाभारतबाट व्यवस्थित गरेर मात्र खनिज निकाल्नुपर्ने र सिद्धान्तको आधारमा मात्र नभएर व्यवहारिक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताए । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरे नछुने गरेर वातावरणीय प्रभाव मध्यनजर गर्दै ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने बताए ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले ‘चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ’ भन्दै ‘संरक्षण नगरे तराई मरुभूमि बन्ने खतरा रहेको’ औंल्याए । ‘त्यसैले हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने नभई उचित सदुपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘सरकार यसबारे विस्तृत छलफल र अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।’